ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်)
*Location – ShweMarlar Yeikmon, Kamaryut Township.
*Price – 1200 Lakhs
*Property Type — Apartment(4F)
*Area — 1080 sqft
*Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, 1-Air Con, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — Parquet, 2-Bathrooms and ready to live located at Kamaryut Township.
Property ID: S-1186236
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်)
Shwe Gandamar Street (ရွှေဂန္ဓာမာလမ်း)
ကမာရွတ်၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း ရောင်းရန်ရှိသော ပထမထပ်တိုက်ခန်း
Pyi Yeik Mon Housings (ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ)
Code-7443 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7424 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ကမာရွတ်၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
ဗဟိုလမ်းမကြီးနှင့်် ရွာမကျောင်းလမ်း အနီးတွင်ရှိသော တန်ဖိုးသင့်အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းကျုယ်ရောင်းရန်
Code-7187 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်5Floor တိုက်ခန်းအားရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7186 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်5Floor တိုက်ခန်းအား ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7185 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်4Floor တိုက်ခန်းအား ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7184 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7217 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် Home Loan ချိတ်၍ ရသော မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7238 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်4Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7232 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် 4Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7231 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်6Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7230 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်5Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7229 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7727 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ကျွန်းပါကေးခင်းပြီး4Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-6245 ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Baho Road (ဗဟိုလမ်းမ)
Shweproperty ID: S-1186236
Mobile 09443086254, 09443033261, 09798424739
Office no: 01209310, 01209311